I-American Maltese Bichon: Inja Encane Yokuzala | Izinja Zomhlaba
Ukuzala Kwezinja zaseMelika zaseMalta
I-American Maltese Bichon noma ithoyizi Kuyinja egqame ngohlamvu lwayo oluphilayoKungumhlobo lapho ama-specimens ethandeka njengoba ehlakaniphile futhi ngosayizi wawo omncane ayaziswa kakhulu njengenja ehambisana nayo ukuthatha yonke indawo.
Kufanele wazi ukuthi lawa ma-canine yize enobukhulu bawo obuncane ayakwazi ukuzivocavoca kahle kakhulu, empeleni ayadinga okungenani imizuzu engama-30 ngosuku yokugijima futhi benza zonke izinhlobo zemisebenzi ukuze bahlale befanelekile futhi bazijabulise nenkosi yabo.
2 Zinjani izinja zalolu hlobo nezingane?
3 Ukuziphatha kwakhe nezinye izilwane ezifuywayo
5 Yini ukunakekelwa okujwayelekile kwalolu hlobo?
Ngokuqondene nenkampani, lolu hlobo luphelele kulabo abafuna umngane omuhle ukuthi ihlala iminyaka eminingi, sibonga isikhathi eside sokuphila. Babancane ukuthi zikwazi ukuheha ukunaka kwabantu noma yikuphi lapho beya khona futhi abanqikazi ukubuyisa lokho kunakwa, ngezenzo zobungani nezidlalayo ngoba bayakuthanda ukudlala futhi kuyingxenye yalokho abahlale bekufuna kubaphathi babo.
Kungakho kubalulekile ukuthi ube namathoyizi ezinhlobo ezahlukahlukene. ezenelisa izidingo zabo zokuzijabulisa, ngaleyo ndlela bagweme isithukuthezi, ukuthi bagxile ezintweni ezisendlini ezingazilimaza noma zizilimaze.
Uyasola ngabantu angabazi, unamahloni futhi akulula ukusondela kuye kepha ngemuva kokuzethemba ukuthi unothando olukhulu, uyayilalela inkosi yakhe. Mayelana nezici zomzimba, singakusho lokho esigabeni sabo semidlwane zinesisindo esingaba ngu-1,5 kg futhi lapho ufinyelela kubantu abadala phakathi kuka-2,5 kg no-3 kg, kanti ukuphakama komuntu kufinyelela ngaphezu kuka-25,5 cm.
Imilenze nesiqu kuvame ukuba mfushane kunalezo zohlobo lwaseYurophu lapho zifinyelela esigabeni sazo sokukhula, umzimba wakhe empeleni ubukeka ubumbene kakhulu kusuka entanyeni kuye emsileni futhi uthambile.
Uboya bayo bunjalo kuchichima, kuminyene, kuyashelela futhi kusilika okujabulisa impela ukuthintwa. Impumulo iyacabalele futhi yenza ubuso bubukeke bube buncane kakhulu futhi buhle, lapho kufakwa khona ikhala elimnyama eliyindilinga ngokuphelele namehlo amabili aqhakazile nakhulu alinganiselayo akwenza kucace.
Lesi sethi sonke sibenza babukeke njenge-plush ekhangayo Lokho kubangela ukutotosa nokucindezela ngaso sonke isikhathi, okuyinto abayithandayo. Ijazi limhlophe, okuyisici esivelele futhi esihlukile salolu hlobo, likhula kakhulu futhi livame ukukhombisa isimo sempilo nesimo sengqondo sesilwane sakho, leso sekhanda, amakhosi amaningi bakhetha ukuyicosha ngomnsalo ukuze bayisuse emehlweni abo futhi baveze ubuso babo obuhle.
Kepha ukuze ihlale ibukeka yinhle futhi ingenasici, le nwele idinga ukunakekelwa okuthile ukuze ingawi noma iphenduke imbi. Ingxenye yokunakekelwa ilele ekusetshenzisweni kokusikeka okuvamile.
Zinjani izinja zalolu hlobo nezingane?
Yize kuyiqiniso ukuthi I-American Maltese Bichon inobungani ngokujwayelekile, ngaphezu kokudlala nokudlala kamnandi nabantu amjwayele, kubalulekile ukuthi kusukela ebuntwaneni afundiswe futhi ahlangane nabantu ngendlela efanele ukuze ahloniphe futhi angabi neziqephu zokuziphatha okunolaka.
Lokhu kudinga ukunakwa okukhethekile lapho kunezingane ekhaya, kusukela umdlwane walolu hlobo uziphethe kahle kuzoba ozodlala naye ezinganeni zakho, ngaphandle kwengozi yezingozi futhi njalo ufundise izingane zakho ukuhlonipha izilwane.
Y kunjalo akulimazi ukuthi uqaphele ngokuphelele lapho bedlala, ukugwema izimo ezidala ukusabela noma izehlakalo ngoba bayizinja ezintekenteke kakhulu.
Ukuziphatha kwakhe nezinye izilwane ezifuywayo
Kufanele siphikelele ku inqubo yokuxhumana nomuntu kusukela esemncane, ngoba bakulungele ukuba nezinye izilwane ezifuywayo futhi bazivume embuthanweni wabo, noma kunjalo bangasabela ebukhoneni benja entsha ngakho-ke kufanele uyibuke.
Lapho lezi kuyimidlwane embalwa nje, zifanelwe ukunakekelwa nokuzinikela nsuku zonke okufanele kwenziwe njalo, ngoba yikho okuzoqinisekisa inhlalakahle yakho nentuthuko enhle.
Yini ukunakekelwa okujwayelekile kwalolu hlobo?
Siyazi ukuthi uboya bungesinye sezakhi esidinga ukunakwa kakhulu nokunakekelwa komsele wezinyembezi kulandela izinga lokubaluleka.
Ngaphambi kokuthi sisho ukuthi uboya buningi futhi bukhula ngokushesha okukhulu ngakho-ke kufanele ube ngaphezulu, ukusebenzisa ukunakwa okukhethekile evumela ukuthi igcinwe isesimweni esihle futhi yinhle. Kunconywa ukufaka ukusika njalo ezinyangeni ezintathu.
Mayelana nokuwashwa kwalokhu, ungakhohlwa ukuzenzela imikhiqizo esezingeni elakhelwe lolu hlobo lwezinwele, kunconywa okulandelayo ama-shampoo ane-pH engu-5,5. Kepha ngaphambi kokugeza umngani wethu omncane, kubalulekile ukuxubha izinwele zakhe nokususa noma yimaphi amafindo angaba nawo.
Indlela enhle yokwenza lokhu kususwa kwefindo yile ukumanzisa izinwele kancane ngosizo lwesifuthoNgale ndlela ngeke ubangele ubuhlungu esilwaneni sakho futhi kulula ukwenza lo msebenzi.
Lapho uyigeza gcoba imoto eshintshashintshayo Ngezinwele ezimanzi, ukususa konke ukungcola, gcoba ngobumnene yonke indawo emzimbeni ngenhla nangaphansi bese ugeza ngamanzi amaningi.
Ngokushesha sebenzisa i-intensifier emhlophe okufanele uyishiye isikhashana Imizuzu engu-5 ngaphambi kokugeza ngamanzi, uzobona indlela ekhazimula ngayo ingubo yakhe emhlophe.
Bese uyomisa bese ufaka i-conditioner ekhethekile izinja ezizokondliwa ngazo futhi zizothuthukisa ukukhanya kwazo futhi uma ngokwengeziwe ufuna ukuthi zithandeke, ungafaka amakha athile ezinjeni bese kuthi lapho ufihla ufihle iphunga lomzimba abavame ukuba nalo.
Akunconyelwa ukuwageza nsuku zonke kunalokho njalo ezinsukwini eziyi-15 ngoba lokhu kungalimaza isikhumba nejazi, ngale ndlela uma ufuna ukuthi ibe mhlophe qwa ngaso sonke isikhathi futhi isalahlekile ngosuku lokugeza ungafaka i-shampoo encane eyomile ezingxenyeni ezingcolile ngakho-ke ugwema ukuba manzi.
Ukuxubha kubaluleke kakhulu Futhi kufanele kwenziwe nsuku zonke ngekama lensimbi olithola esitolo sezilwane nenye enezipikisi. Lo msebenzi wenziwa ngokumelene nezinwele ngoba uthanda ukuphefumula kwalokhu, ngakho-ke uyigcina ingashintshwanga futhi inhle.
Ukuzigcina zisendaweni efanele kulula gcoba umkhiqizo wezikelemu ukuze uwusebenzise ngaphandle njalo ezinyangeni ezimbili nawo wonke umzimba wakho, kufaka phakathi ngaphakathi kwezindlebe zakho njengoba izibungu zivame ukucasha lapho.
Izipikili kufanele zihlale zifushane ukuze ukwazi ukuhamba ngaphandle kokungaphatheki kahle futhi ungakuthinti ukuhamba kwakho nomoya wakho, njalo uma umgeza khumbula ukusika izinwele ezungeze isinqe sakhe kanye namaphadi.
Ngokuqondene nendawo yamehlo, lokhu kudinga ukunakekelwa nsuku zonke ukugcina izinwele kule ndawo zingabonakali emehlweni ngoba zidala ukucasuka nokuqhubeka kudabuke, yingakho amabala ansundu ezinwele kule ndawo. Zidinga ukusikwa njalo futhi zisuswe emehlweni akhe ngama-wipe amanzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Ukuzala Kwezinja zaseMelika zaseMalta
Izinhlobo ezinhle kakhulu zezinja zase-Asia
Thola uhlobo lwenja yeGarafian Shepherd